Cishe bonke abakhona bazizwe ingxenye ukushaya kwenhliziyo zokuphila kwakhe. Lokhu uphawu zingavela okomuntu engumqemane ngesikhathi umsebenzi noma ushintsho lokushisa komzimba (okweqile), futhi ukuba ukubonakaliswa izifo zenhliziyo, abakaze, endocrine, zokuphefumula, wokugaya ukudla futhi urinary ngisho izinhlelo. Yingakho phinda yesikhalazo, noma ushintsho ukungadli inhliziyo ayidingi ukuba bahlanganyele self-ukuxilongwa kanye self-ukwelashwa - kungaholela ukwamukelwa engenabulungisa imithi ukuthuthukisa izinhlobo eziphambili izifo.
Kumele kukhunjulwe ukuthi kubangela palpitations - kuyinto esimweni ngasinye inhlanganisela yezici ezimbalwa, ngoba ishayela okusheshayo kungase kubonise indlela izinkinga wonke umzimba, pathology, okuyinto wamshaya uhlelo omunye isiguli. Ixhomeke imvamisa inhliziyo ishaya ngisho nasekugugeni lomuntu - intokazi ingane kwenhliziyo uhlale kunakunoma omdala. Futhi, kunezimo lapho ukushaya kwenhliziyo njalo kuyinto inkomba umthamo evamile oluhambelana zomzimba - engekho ukusheshisa ishayela ngesikhathi kokuvivinya umzimba, okweqile, ukwandisa izinga lokushisa emzimbeni futhi kungenzeka kubonisa izifo emzimbeni.
Kwenhliziyo ingavuthi njalo, ngisho emva kokudla esindayo - ke njalo kuvusa enomopho ezithweni wokugaya ukudla lapho besanda kuqala. Phakathi ukugaya okwengeziwe ukudla kungenxa palpitations njalo ukumuncwa kwezakhi futhi ukukhishwa kwama-hormone, lingene egazini. Lapho emathunjini isifo , ishayela ngokushesha zingachazwa ngezinqubo isinyathelo reflex - ne amajaqamba nobuhlungu kuhlasela.
Ngokungangabazeki, palpitations inhliziyo, izimbangela zazo iziguli Sikhathazekile kakhulu, iningi amacala zenzeka izinqubo sokugembula ohlelweni senhliziyo futhi ethukile. Kufanele kuqondwe ukuthi ezintweni ngokomzwelo ngokuvamile kubangela esasizosheshisa kwenhliziyo, oludlula ngokushesha futhi ngokuzimela kulandela ukuphela ukucindezeleka, kodwa ukuhlaselwa okunjalo kahle ikubekezelele iziguli.
Esikhathini zokugula kohlelo lokukhambisa iingazi lihlelo njalo ukushaya kwenhliziyo iba wokufika futhi ngokuvamile engabonakali izimpawu lomuntu - isiguli ngakho "ejwayele" ukuze isimo ukuthi iyeke osabela ngayo kukho. Ukuwohloka kungaba avuse ukucindezeleka ngokomzimba nangokomzwelo, nokuthi ukucindezeleka kuba isibangeli ukuthi ekugcineni kuletha umuntu kudokotela.
palpitations njalo yezifo umzimba kungenzeka nge nokuncipha noma ukunyusa i-hormone lokuhlala egazini serum - ngisho noshintsho oluncane ezingeni yegilo i-hormone pituitary yegilo, parathyroid, indlala adrenal ingavuthi imbangela ishayela njalo.
umkhawulo bokuphila evamile umuntu ngamunye eyedwa
Kumelwe sikhumbule ukuthi tachycardia kungaphinde kwenzeke ngesikhathi ukungenisa ukudla okuthile - Ingasheshisa kwenhliziyo sebephuze izingilazi esiningi caffeine, tannin, ezinye alkaloids, okuyizinto amakhambi amaningi kwezokwelapha, ezinye izithelo ngisho imifino. Ezinye iziguli palpitations njalo kungenzeka uma imithi - ezinye izidakamizwa ngokwabo yashesha ishayela, futhi abanye bangase babe imbangela ukusabela compensatory, isib, lapho ethola isisu futhi kukhuthaza of semali izakhi trace (potassium, magnesium, i-sodium, chlorine).
Kunoma ikuphi, ekuhlaseleni tachycardia kufanele sibe imbangela ukwelashwa lesiguli udokotela - lost isikhathi kungaholela izinguquko ezingenakuhlehliswa emzimbeni.
Umjovo ongama - imijovo ongama
Foot iqakala kanjani ukukhetha?
Kwezinye izimo kubalulekile acabangele RH isici? Ukukhulelwa igazi
Biography Petlyura - kusukela Simon ethuneni
Indlela tie spokes Pullover kwabesifazane (imidvwebo)?
Audit imisebenzi ukukhiqizwa inhlangano kwezomnotho. Izinhlobo zemibiko audit
Compote of izithelo ezomisiwe
Leli robhothi wezindlu Panda X500: ukubuyekezwa, izincazelo, izincazelo kanye nokubuyekezwa
Khiya ngesithuthuthu, noma kanjani ukuvikela ibhayisikili lakho ngokumelene ukweba
I izibikezelo zikaNostradamus. Kungakhathaliseki kukhona kuzo usongo esintwini?